NOOBS: ku rakib nidaamyo badan raashinkaaga Raspberry qalabkan | Laga soo bilaabo Linux
NOOBS: ku rakib nidaamyo badan raashinkaaga Raspberry qalabkan
Markii hore shaki yar ayaan ka qabay Raspberry Pi, laakiin waan ku dhiirraday, ka bilow RaspAnd iyo inkasta oo natiijadu noqotay wixii loo ballanqaaday, Waxa iga soo hadhay anigoo yara qanacsan. Markaad aragto in qalabkan kor loo qaadi karo wax badan, go'aan ka gaadho wixii aadan rabin markii hore iyo si fiican u dooro inaad ku rakibto nidaam Linux ah.
Raspberry Pi wuxuu leeyahay nidaam hawlgal rasmi ah in dad badani hore u ogaan doonaan ama maqleen Raspbian kaas oo ku saleysan Debian. Sidoo kale Waxaa jira nidaamyo kale, kuwani waxay ka yimaadaan dhinac saddexaad sida Ubuntu Mate, Windows 10, Libreelec, RecalBox, iyo kuwo kale.
Marka la eego liistada la heli karo ee kuweenna hadda soo iibsaday Raspberry, ma naqaano qaar ka mid ah nidaamyadaas la heli karo kuwa kalena waa la iska tuuri karaa.
Si looga fogaado tijaabinta nidaam kasta, waa inaad qaabeysaa SD, ku dhajisaa nidaamka kuna soo celisaa Raspberry Pi, waxaan haynaa qalab weyn oo noo oggolaan doona inaan dhammaan nidaamyadan isla mar wada dhigno.
1 Ku saabsan NOOBS
2 Sidee loo adeegsadaa NOOBS on Raspberry Pi?
Ku saabsan NOOBS
Software Ka Baxsan Box oo si fiican loogu yaqaanno NOOBS waa adeeg aad u weyn oo aan ku isticmaali karno Raspberry Pi, qalabkan wuxuu ina siinayaa suurtagalnimada in lagu rakibo wax ka badan hal nidaam hawlgal iyada oo aan wax dhibaato ahi ka jirin iyo qaab fudud.
Si loo isticmaalo qalabkan waa inaan tagnaa bogga rasmiga ah ee Raspberry qaybteeda soo dejintana waxaan ka heli karnaa NOOBS, the link waa kan.
Sida aad u arki karto NOOBS waxay leedahay laba nooc "NOOBS iyo NOOBS Lite"Farqiga u dhexeeya midka iyo kan kale ayaa ah in nooca Lite uusan ku darin Raspbian ama LibreELEC si ay ugu awoodaan inay ku rakibaan gudaha, halka nooca caadiga ah uu leeyahay asal ahaan.
Halkan adiga Waad soo dejisan kartaa nooca aad jeceshahaySi kastaba ha noqotee, haddii aadan xiiseyneyn inaad rakibto Raspbian ama LibreELEC xilligan, waxaad si toos ah u dooran kartaa inaad kala soo baxdo nooca Lite.
Marka soo dejinta la dhammeeyo, waxaan sii wadi doonnaa inaan hoos u dhigno faylka la helay ka soo degsashada, tan waxaan ku heli doonnaa galka wax kasta oo lagama maarmaanka u ah si aan ugu rakibno nidaamyo badan Raspberry-keena.
Sidee loo adeegsadaa NOOBS on Raspberry Pi?
Gudaha xulashooyinka aan ku haysanno NOOBS waa inaan awoodno inaan ku darno nidaamyo galka "os" taasi waxay ku jirtaa wixii aan furaney hadda.
Faylkaas waxaan si fudud ku darnaa nidaamyada aan dooneyno in nala rakibo.
Shakhsi ahaan, ma aanan helin nidaamyo dheeri ah "hadda" oo ay ogaan karaan NOOBS, tan iyo markii kuwa aan helay ay ku yimaadeen qaab muuqaal muuqaal ah.
Horey wax walba waan u dhameeyay, Waxaan sii wadaynaa inaan nuqul ka sameysano dhamaan waxyaabaha ku jira galka weyn ee NOOBS oo aan dhex dhigno SD-geena horeyba loo qaabeeyey diyaarna u ah in la isticmaalo.
Ya ku dhejiyay SD-ga Raspberry Pi wuxuuna ku xiran yahay wax kasta oo lagama maarmaan ah, waxaan sii wadeynaa inaan ku xirno awoodda si aan u daarno, isla markiiba waxaan arki doonaa shaashad yar oo waxaan sugi doonaa dhowr ilbiriqsi inta NOOBS ay bilaabaneyso.
Tan ayaa la sameeyay waxay kuxirantahay nooca NOOBS ee aad soo dejisay waa waxaad arki doontaa marka hore, hadday soo dejiyeen nooca caadiga ah wuxuu arki doonaa Raspbian iyo LibreELEC oo diyaar u ah in la rakibohalka Haddii ay ahayd nooca qoraalka, waxba arki maayaan xilligan.
Gudaha NOOBS dhexdeeda waxaan ku arki karnaa inay leedahay dhowr ikhtiyaar iyo in ay yihiin kuwo dareen leh, waxa ugu horeeya waa in lagu xiro shabakada wifi.
Ya ku xiran NOOBS wuxuu cusbooneysiin doonaa liiska nidaamyada la heli karo, oo ina tusaysa wax badan, maadaama ay soo dejineyso oo rakibayso iyaga.
Halkan aan doorano kuwa aan rabno dabcanna kuwa naloo oggol yahay inaan rakibno maaddaama ay in badan ku xiran tahay cabbirka SD-ga.
Marka nidaamyada la doorto, waxaan si fudud u gujineynaa rakibida astaanta waana inaad sugto inyar inta hawshu socoto.
Dhamaadka, NOOBS waxay noo sheegi doontaa in howsha la qabtay waxaanan sii amba qaadaynaa inaan dib u bilawno Raspberry Pi-ga si aan u aragno nidaamyada ay heli karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » NOOBS: ku rakib nidaamyo badan raashinkaaga Raspberry qalabkan
MX-Linux 17.1: Distoor casri ah, iftiin leh, awood badan oo saaxiibtinimo leh.